Fanafihana sy fanolanana :: Mpanao asa an-terivozona no tompon’antoka • AoRaha
Fanafihana sy fanolanana Mpanao asa an-terivozona no tompon’antoka
Fanafihana efatra niampy fikasihan-tanana sy fanolanana vehivavy lehibe roa no nitranga tao amin’ny fokontany Miaramasoandro, Atsongo, Mahafaly ary Vatofotsy, nanomboka tamin’ny faramparan’ny volana jona hatramin’ny tapatapaky ny volana jolay teo.
Fantatra telo lahy mbola misazy asa an-terivozona niampy lehilahy iray vao avy namita sazy tany am-ponja, iray volana monja izay, no voatondro ho tompon’antoka tamin’ireo. Samy nalefa any amin’ny fonjan’i Tsiafahy avokoa izy ireo, taorian’ny fampiakarana ny raharaha teo anivon’ny Fampanoavan’Antsirabe, tamin’ny alakamisy. Roa lahy hafa voalaza ho nandray sy nividy ireo entana halatra kosa no voatazona vonjimaika ao amin’ny fon- jan’Antsirabe.
Saika nitovy avokoa ny fomba nisehoan’ireo asa ratsy ireo. Miditra an-keriny ao amin’ilay tokantrano ireo jiolahy. Mikasi-tanana ny lehilahy izy ireo, avy eo manangona ny vola, firavaka, finday, solosaina sy ireo entana lafo vidy. Ho an’ilay tokantrano tao Atsongo kosa dia io niampy fanolanana vehivavy lehibe io.
Nanampy tamin’ny fikarohana an’ireo jiolahy ny fampiasan’ny iray tamin’izy ireo ny finday azony nandritra ny asa ratsiny. Narahina hatrany ireo antso nataony ka tamin’ny alalan’ireo olona nifandray taminy matetika no nahafahana nanao ny vela-pandrika.
Herisetra ara-pananahana :: Ankizivavy, dimy taona, naolana sy novonoina ho faty